तपाईंको व्यापार सफ्टवेयर निर्माण गर्न चरणहरू - Victor Mochere
व्यापार सफ्टवेयर व्यवसायहरु द्वारा संचालन को सुविधा को लागी प्रयोग को लागी डिजाइन गरीएको कम्प्युटर प्रोग्राम को एक सेट हो। कम्प्युटर प्रोग्रामहरूले उत्पादकता बढाउन र मापन गर्न मद्दत गर्दछ। व्यापार सफ्टवेयर एक संगठन को विशिष्ट व्यापार आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी बनाइएको छ। जस्तै, यो सजिलै संग फरक व्यापार वातावरण मा हस्तान्तरण गर्न सकिदैन। त्यो मात्र हुन्छ यदि वातावरणहरू सञ्चालनमा समान छन्।
अद्वितीय आवश्यकताहरूको कारण, अफ-द-शेल्फ सफ्टवेयरले तपाईंको आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने सम्भावना छैन। प्राविधिक सुधारहरूको साथ, नयाँ सफ्टवेयर समाधानहरू प्राय: व्यापार सञ्चालनहरू चलाउनको लागि पेश गरिन्छ। त्यस कारणको लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो व्यवसायको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्याकेज छनौट गर्नुहोस्। तपाईले यो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि यो तपाईको बजेट अन्तर्गत पर्दछ। व्यापार सफ्टवेयरले धेरै कार्यहरू ह्यान्डल गर्दछ:
व्यवस्थापन कार्यहरू हेरचाह गर्दै
समय, श्रम र लागत बचत
दक्षता र शुद्धता बढाउँदै
सञ्चालनमा गल्तीहरूबाट बच्ने
व्यापार प्रगति ट्रयाक राख्दै
विकासकर्ताहरूले सफ्टवेयरको डिजाइन, विकास र परीक्षण गर्न सफ्टवेयर विकास जीवन चक्र प्रयोग गर्छन्। सफ्टवेयर विकास जीवन चक्र (SDLC) को प्रत्येक चरण सफ्टवेयर विकास प्रक्रिया मोडेल द्वारा निर्णय गरिन्छ। SDLC ले उद्योगको अपेक्षाहरू पूरा गर्ने उच्च गुणस्तरको सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। SDLC विधिहरूले सफ्टवेयरको डिजाइनलाई समर्थन गर्दछ। सफ्टवेयरको मर्मतसम्भारमा राम्रोसँग सोचिएको पद्धतिले समर्थन गर्नुपर्छ। प्रत्येक चरणले सफ्टवेयरको जीवन चक्रमा चरण लागू गर्न आवश्यक परिणामहरू उत्पादन गर्दछ।
आवश्यकताहरू त्यसपछि उत्तम डिजाइनहरूमा अनुवाद गरिन्छ। परीक्षण चरण SDLC मा महत्त्वपूर्ण चरणहरू मध्ये एक हो। त्यो किनभने यदि यस चरणमा केहि गलत भयो भने, यसले सम्पूर्ण कोडिङ प्रक्रियाको पुनरावृत्तिको नेतृत्व गर्न सक्छ। उत्तम परीक्षण स्वचालन सफ्टवेयर भएकोले कार्यात्मक परीक्षणका सबै प्रकारहरू सम्पन्न भइसकेको सुनिश्चित गर्दछ। SDLC मा परीक्षण र अन्य सबै चरणहरू विकास टोली द्वारा निहित हुन्छन्। अर्को बिना कुनै चरण सम्भव छैन। तपाईंको व्यापार सफ्टवेयर निर्माण गर्न निम्न चरणहरू छन्।
1. व्यापार समस्या समाधान गर्न को लागी पहिचान गर्नुहोस्
2. मंथन र योजना
3. आवश्यकता र सम्भाव्यता विश्लेषण
4. डिजाइन र प्रोटोटाइप
5. सफ्टवेयर विकास र कोडिङ
6. एकीकरण र परीक्षण
7. कार्यान्वयन र परिचालन
8. सञ्चालन र मर्मतसम्भार
सफ्टवेयरले व्यापार सञ्चालनमा अनुभव भएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्छ। यसले निम्नको ख्याल राख्न मद्दत गर्छ:
टोलीहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्
ट्र्याकिङ र सूची व्यवस्थापन
व्यापार मापन मद्दत गर्दै
फिल्डमा टोलीका सदस्यहरूलाई मद्दत गर्दै
कार्यस्थल विवादहरू समाधान गर्दै
प्रभावकारी सफ्टवेयर विकास गर्न, तपाइँले तपाइँको उत्पादकता लाई सीमित गर्दछ भनेर पहिचान गर्न आवश्यक छ। पहिचान पछि, तपाईं समस्याहरू हटाउने तरिकाहरू खोज्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्रेनस्टर्मिङ SDLC प्रक्रियामा एक महत्त्वपूर्ण चरण हो। यहाँ, कुनै पनि प्रस्ताव अनुमोदन अघि विचार गर्नुपर्छ। योजनाको बखत, परियोजना प्रबन्धकहरूले परियोजनाका सर्तहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। प्रक्रियामा श्रम र भौतिक लागत गणना समावेश छ। यसले लक्ष्य उद्देश्य र नेतृत्व संरचनाको साथ समयतालिका सिर्जना गर्न पनि समावेश गर्दछ। यस चरणमा सरोकारवालाहरूबाट प्रतिक्रियाको समावेश पनि समावेश छ।
सरोकारवालाहरूले विकासकर्ताहरू, सम्भावित ग्राहकहरू, विषयवस्तुका विशेषज्ञहरू, र बिक्री प्रतिनिधिहरू समावेश गर्न सक्छन्। परियोजना प्रबन्धकहरूले सफ्टवेयरको दायरा र उद्देश्य परिभाषित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो किनभने यसले सफ्टवेयर विकास गर्न टोलीको पाठ्यक्रम र प्रावधानहरू प्लट गर्छ। यसले सीमाहरू सेट गर्दछ जसले परियोजनालाई यसको मूल उद्देश्यबाट टाढा जानबाट रोक्छ।
यो यस चरणको समयमा हो कि परियोजना विस्तृत रूपमा निर्दिष्ट हुन्छ। परियोजना प्रबन्धकहरूले परियोजनाको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाउँछन्। आवश्यकता व्यवस्थापन एटलासियन संगम जस्तै सहयोग उपकरण मार्फत स्वचालित प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी उपकरणहरूले वर्ड प्रोसेसरमा म्यानुअल रूपमा नगरीकन आवश्यकताहरू लेख्न मद्दत गर्दछ। यहाँ, तपाइँ परिभाषित गर्नुहुन्छ कि अनुप्रयोगले के गर्नुपर्छ र यसको आवश्यकताहरू। उदाहरण को लागी, सामाजिक मिडिया सफ्टवेयर को अन्य संग जडान गर्न को लागी क्षमता हुनु पर्छ।
एक सूची कार्यक्रम एक खोज सुविधा आवश्यक हुन सक्छ। आवश्यकताहरूको भागको रूपमा, तपाईंले परियोजना विकास गर्न आवश्यक स्रोतहरू परिभाषित गर्न आवश्यक पर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाइँ अनुकूलन निर्माण मेसिन नियन्त्रण गर्न सफ्टवेयर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, मेसिन एक आवश्यकता हुनुपर्छ। सम्भाव्यता विश्लेषणले सफ्टवेयर विकासलाई असर गर्ने प्राविधिक र वित्तीय कारकहरूलाई रूपरेखा दिन्छ। स्रोतहरू र टोलीको संलग्नता जस्ता कारकहरूले लगानीमा प्रतिफल गणना गर्न मद्दत गर्दछ।
यो सफ्टवेयर विकास प्रक्रिया मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण कदम हो। यो यस चरणको समयमा हो कि सफ्टवेयर वास्तुकलाले विशिष्ट परियोजना मापदण्डसँग मेल खान्छ। एपका इन्जिनियरहरूले सेट मापदण्डहरू पछ्याउने अनुकूलन अनुप्रयोग विकास गर्छन्। यसमा परिभाषित उत्पादन डिजाइन र डाटाबेस संरचना र डिजाइन समावेश छ। यस चरणमा आयोजनाको संरचना बनाइन्छ। यसमा अन्तिम प्रोटोटाइप समावेश छ जुन विकासको क्रमिक चरणहरूमा प्रयोग गरिनेछ।
डिजाइन स्टेजको हिस्सा भएकोले, प्रोटोटाइप सफ्टवेयरको प्रारम्भिक संस्करण जस्तै हो। यो अन्तिम उत्पादन कस्तो देखिन्छ र काम गर्नेछ भन्ने एक संकेत हो। प्रोटोटाइप सरोकारवालाहरूलाई देखाउन सकिन्छ र तिनीहरूको प्रतिक्रिया सफ्टवेयर सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ। सम्झनुहोस्, प्रोटोटाइपिङ चरणमा परिवर्तनहरू गर्न यो कम महँगो छ। विकास चरणमा परिमार्जन गर्न कोड पुन: लेखनको तुलनामा।
यो चरण सम्पूर्ण सफ्टवेयर विकास जीवन चक्रको मेरुदण्ड हो। यसले कोड उत्पादन गर्न र वास्तविक सफ्टवेयर अनुप्रयोगमा डिजाइन कागजातहरू अनुवाद गर्न समावेश गर्दछ। टोलीले आफ्नो कोड सफ्टवेयर विनिर्देशहरू अनुसार छ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। परियोजना प्रबन्धकहरूले यो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि निर्दिष्टीकरणहरू सरोकारवालाहरूको आवश्यकताहरू पालना गर्छन्। यदि अघिल्लो चरणहरू राम्रोसँग सम्पन्न भएको थियो भने, त्यसपछि सफ्टवेयरले परियोजनाको आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ।
यस चरणमा प्रणाली परीक्षण र एकीकरण समावेश छ। यो अनुप्रयोग निर्माण र पूरा भएपछि सुरु हुन्छ। यो प्रयोग गरिएको स्वचालन परीक्षण प्रक्रियाको आधारमा फरक हुन सक्छ। स्वचालन परीक्षण ईन्जिनियरहरूले निरन्तर एकीकरणको साथ संयोजनमा स्वचालित परीक्षण फ्रेमवर्कहरू प्रयोग गर्छन्। यो एकाइ परीक्षण, स्वचालन संकलन, र परीक्षण कार्यान्वयन गर्न गरिन्छ। कोड सफा छ भनी सुनिश्चित गर्न, स्वचालन परीक्षण इन्जिनियरहरूले स्वचालन परीक्षक चलाउनु पर्छ। प्रमाणीकरणहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तिनीहरूले सफ्टवेयर प्रभावकारी छ भनेर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छन्। सफ्टवेयर बग-मुक्त छ भनी ग्यारेन्टी भएपछि कार्यान्वयन चरण सुरु हुन्छ।
यो यस चरणको समयमा हो कि उत्पादन स्थापना हुन्छ। यहाँ प्रक्रिया कार्यान्वयन रणनीति अनुसार गरिन्छ। विकसित र परीक्षण सफ्टवेयर उत्पादन मा सारियो। क्रमिक रिलीजहरूमा मात्र विशेष परिवर्तनहरू जारी हुन्छन्। सम्भावित परियोजना जटिलताहरू वा यसको कमीको आधारमा, यो एक साधारण वा स्तब्ध रिलीज हुन सक्छ। रिलीज पछि, अन्त-प्रयोगकर्ताहरूले पूरा भएको सफ्टवेयर अनुप्रयोग परीक्षण गर्ने मौका पाउँछन्। स्वचालनले प्रबन्धकहरूलाई परीक्षण र उत्पादनको बीचमा एप सार्न सक्ने क्षमता दिन्छ। यसले एप्लिकेसन डेलिभरी चक्रमा दोहोर्याउन सकिने र भरपर्दो डिप्लोइमेन्टमा मद्दत गर्छ।
मर्मतसम्भार र क्रमिक स्तरवृद्धि विकासको अन्तिम चरणमा गरिन्छ। यस चरणमा विशेष ध्यान दिइन्छ किनभने एप अपडेट र फाइन-ट्यून हुनुपर्छ। यो यस चरणको समयमा हो कि अनुप्रयोगका सुविधाहरू ठोस हुन्छन्। यसको कार्यसम्पादन पनि अद्यावधिक हुन्छ र प्रतिक्रियाको आधारमा समायोजन गरिन्छ। प्रयोगकर्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्न नयाँ क्षमताहरू थप्न सकिन्छ।
सफ्टवेयर विकास जीवन चक्रले विकास प्रबन्धकहरूलाई के भइरहेको छ भनेर देखाउँछ। यसले उनीहरूलाई विकास प्रक्रिया कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछ। कुनै पनि व्यावसायिक प्रक्रिया जस्तै, SDLC ले एउटा एप सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गर्नमा केन्द्रित छ। यसले दिन-प्रतिदिन कोडिङदेखि उत्पादन समयरेखाहरू प्रबन्ध गर्न परियोजनाको स्केलेबल दृश्य विकास गर्दछ।
साइबर सुरक्षा र अनलाइन क्यासिनो